ပရိသတျတှမေမွငျဖူးတဲ့ ပုံစံအသဈနဲ့ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျးရဲ့ Music Video - Cantwait2say
ဝိုငျးစုခိုငျသိနျးဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အအောငျမွငျဆုံး အမြိုးသမီးအဆိုတျောတှထေဲက တဈဦးလို့ ဆိုရမှာပါ။ လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျးမြားစှာကတညျးက အခုအခြိနျအထိ အောငျမွငျမှုကိုထိနျးထားနိုငျဆဲဖွဈတဲ့ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျးက လကျရှိမှာလညျး သူဝါသနာပါတဲ့ သီခငျြးတှဆေကျလကျဖနျတီးပွီး ပရိသတျတှကေို ဆှဲဆောငျထားနိုငျဆဲဖွဈသလို ခဈြရတဲ့ ခဈြသူ အောငျလနဲ့ သာယာတဲ့အခဈြရေးကိုပိုငျဆိုငျထားသူလညျးဖွဈပါတယျ။ ဝိုငျးစုခိုငျသိနျးကမကွာသေးမီက သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျမှာ သီခငျြးအသဈလေးတဈပုဒျရဲ့ Music Video ကို တငျလာခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီ Music Video လေးက ပရိသတျတှတေျောတျောမြားမြားကို မကျြလုံးပွူးသှားစခေဲ့တဲ့ video လေးပါ။ အကွောငျးကတော့ အဲဒီ video လေးထဲမှာ မငျးသားမပါပဲ မငျးသမီးနှဈယောကျတညျးနဲ့ မိနျးကလေးနှဈယောကျကွားက ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို ဖျောပွထားတဲ့ Video လေးဖွဈလို့ပါ။ သီခငျြးလေးရဲ့နာမညျက Sunshine ဖွဈပွီး နရေောငျခွညျလို ကိုယျ့ဘဝကို နှေးထှေးသာယာစတေဲ့ ခဈြသူတဈဦးကို ရညျညှနျးတယျလို့ယူဆရပါတယျ။ ဒီသီခငျြးကို အောငျလက ရေးပေးထားတာဖွဈပွီး ဝိုငျးစုနဲ့ အဆိုတျော လိမ်မျောသီးက သိပျခဈြကွတဲ့ ခဈြသူစုံတှဲလေးအဖွဈ ကွညျနူးစရာသရုပျဆောငျထားတာတှရေ့ပါတယျ။
ဝိုငျးစုက ဒီ Music Video လေးကို ပရိသတျတှမေမွငျဖူးတဲ့ ပုံစံအသဈလေးနဲ့ အခွား သီခငျြးတှနေဲ့ ကှဲထှကျနအေောငျ အိုငျဒီယာမိုကျမိုကျလေးနဲ့ ရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီး ပရိသတျတှကေလညျး သဘောကနြကွေတာတှရေ့ပါတယျ။ ဝိုငျးစုက ဒီနေ့ (6.1.2020) နလေ့ညျခငျးမှာ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျကနေ Music Video လေးကိုတငျထားခဲ့တာဖွဈပွီး တဈနာရီလောကျအကွာမှာတငျ ကွညျ့ရှုသူပေါငျး တဈသောငျးနီးပါးဖွဈသှားခဲ့သလို ပွနျလညျ မြှဝသေူတှလေညျး မြားစှာရှိခဲ့ပါတယျ။ ပွောခငျြလှနျးလို့ပရိသတျကွီးအတှကျ ဝိုငျးစုရဲ့ Sunshine သီခငျြးလေးရဲ့ Music Video အမိုကျစားလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
☀️SUNSHINE☀️ Official MV —ဝိုငျးစုခိုငျသိနျး—
☀️SUNSHINE☀️ Official MV—ဝိုငျးစုခိုငျသိနျး—ဝိုငျးစုရဲ့ နောကျဆုံးထှကျရှိထားတဲ့ နှားကြောငျးသူ album ထဲက sunshine သီခငျြးလေးရဲ့ Music Video အမိုကျစားလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါပွီ! ကဲ.. ကိုယျ့ရဲ့ sunshine လေးတှကေို mention ချေါပွီး သီခငျြးလေးကို တူတူနားထောငျကွရအောငျ..!!Audio link👉🏼http://taythanthar.com/songs/402#402🎧တေးသံသာမှာ သီခငျြးနားထောငျပါ🎧Tay Than Thar App download linkFor iOS 👉🏼👉🏼 apple.co/2Oi1mspFor Android 👉🏼👉🏼 http://bit.ly/2LblN70YouTube Channel👉🏼👉🏼 https://bit.ly/2RobnDR#တေးသံသာ #TayThanTharMobileApp #sunshine #ဝိုငျးစုခိုငျသိနျး #အောငျလ #tcreation
Gepostet von Wyne Su Khaing Thein am Sonntag, 31. Mai 2020
ပွောခငျြလှနျးလို့ပရိသတျကွီးရော ဝိုငျးစုကိုခဈြကွလား။ ဝိုငျးစုရဲ့နောကျထပျထှကျရှိလာမယျ့ သီခငျြးတှကေိုရော နားဆငျခံစားအားပေးဖို့ အသငျ့ပဲလား။ Sunshine Music Video လေးကိုကွညျ့ရှုပွီးတော့ရော ဘယျလိုခံစားမှုလေးတှရေကွလဲ။ ပွောခဲ့ကွပါဦး။
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီးအဆိုတော်တွေထဲက တစ်ဦးလို့ ဆိုရမှာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက အခုအချိန်အထိ အောင်မြင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ဆဲဖြစ်တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက လက်ရှိမှာလည်း သူဝါသနာပါတဲ့ သီချင်းတွေဆက်လက်ဖန်တီးပြီး ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ဆဲဖြစ်သလို ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ အောင်လနဲ့ သာယာတဲ့အချစ်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကမကြာသေးမီက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ သီချင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်ရဲ့ Music Video ကို တင်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ Music Video လေးက ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကို မျက်လုံးပြူးသွားစေခဲ့တဲ့ video လေးပါ။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီ video လေးထဲမှာ မင်းသားမပါပဲ မင်းသမီးနှစ်ယောက်တည်းနဲ့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ပြထားတဲ့ Video လေးဖြစ်လို့ပါ။ သီချင်းလေးရဲ့နာမည်က Sunshine ဖြစ်ပြီး နေရောင်ခြည်လို ကိုယ့်ဘဝကို နွေးထွေးသာယာစေတဲ့ ချစ်သူတစ်ဦးကို ရည်ညွှန်းတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို အောင်လက ရေးပေးထားတာဖြစ်ပြီး ဝိုင်းစုနဲ့ အဆိုတော် လိမ္မော်သီးက သိပ်ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲလေးအဖြစ် ကြည်နူးစရာသရုပ်ဆောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဝိုင်းစုက ဒီ Music Video လေးကို ပရိသတ်တွေမမြင်ဖူးတဲ့ ပုံစံအသစ်လေးနဲ့ အခြား သီချင်းတွေနဲ့ ကွဲထွက်နေအောင် အိုင်ဒီယာမိုက်မိုက်လေးနဲ့ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း သဘောကျနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဝိုင်းစုက ဒီနေ့ (6.1.2020) နေ့လည်ခင်းမှာ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ကနေ Music Video လေးကိုတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်နာရီလောက်အကြာမှာတင် ကြည့်ရှုသူပေါင်း တစ်သောင်းနီးပါးဖြစ်သွားခဲ့သလို ပြန်လည် မျှဝေသူတွေလည်း များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဝိုင်းစုရဲ့ Sunshine သီချင်းလေးရဲ့ Music Video အမိုက်စားလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်ကြီးရော ဝိုင်းစုကိုချစ်ကြလား။ ဝိုင်းစုရဲ့နောက်ထပ်ထွက်ရှိလာမယ့် သီချင်းတွေကိုရော နားဆင်ခံစားအားပေးဖို့ အသင့်ပဲလား။ Sunshine Music Video လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ရော ဘယ်လိုခံစားမှုလေးတွေရကြလဲ။ ပြောခဲ့ကြပါဦး။